ရဲရင့်သက်ဇွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
>Oratha - Let's go, Brother
>သာသနာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးက အမေရိကန်အရြေႚိံငြ့် အနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဌာနခြဲမဵားဖြဲႚစည်း
Posts Tagged ‘ ရဲရင့်သက်ဇွဲ ’
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ၉၆ ဒီဇင်ဘာတမ်းခြင်း
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ၉၆ ဒီဇင်ဘာတမ်းခြင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၇ ရသေ့ စိတ်ဖြေတဲ့ ရသေ့ ဘယ်လိုစိတ်ဖြေသလဲ ငါမတွေ့ ဘူးတော့ မသိဘူး …… ဒီရာသီမှာ … မဟုတ်ဘူး...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ငါ့ရဲ့ညထဲမှာ ငါ့ကိုထားခဲ့ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၇ ည လကို အန်ချလိုက်တယ် နှင်းတွေထဲ ပိုးစိုးပက်စက် လရဲ့အရိပ်နဲ့ အရောင်များ ညအမှောင်မှာ တောက်ပ ကိုယ့်အတွက်တော့ သတ်ပုံမှားတဲ့ည...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● အိပ်မက်တယ် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၉၊ ၂၀၁၇ နွေရာသီတဲ့ နေ့မရှိတဲ့ ညမရှိတဲ့ ဝင်ရိုးစွန်းနားကပ်နေတဲ့အရပ် ငါ့အတွက်တော့ ပြဇာတ်ဆန်တယ် ….။ မိုးလင်းနေတာလား မိုးချုပ်နေတာလား နေဝင်နေတာလား နေထွက်နေတာလား မငြိမ်းသောအလင်းရောင်...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● မသိတော့ဘူး … နည်းနည်းလေးရအောင်တွေး (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၁၀၇ ဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ ဒီတနွေ နည်းနည်း နွေပီသလာတဲ့အထဲမှာ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေကတော့ အအေးဓာတ်ကိုသယ်ဆောင်လာတုန်းပဲ ….။ ငါ …...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ငြိမ်းချမိးရေးလဲ သွေးသံရဲရဲ
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ငြိမ်းချမိးရေးလဲ သွေးသံရဲရဲ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆ သြော်…စစ်ဟူသည် သွေးတွေရယ် ယမ်းငွေ့ တွေရယ် ငိုသံတွေရယ် သချီိုင်းကုန်းရယ် ရောယှက်ထားသော အနိဌာရုံ ပန်းချီကားတချပ် ……...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ၏ ကဗျာစာအုပ် ဘာသာ ၃ မျိုးနဲ့ ထွက်ပြီ (မိုးမခ စာအုပ်စင်) ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၆ ဧရာဝတီကို ချစ်သော၊ ပုဂံယဉ်ကျေးမှုများနဲ့ စည်းလူုံးညီညွတ်မှုကို ချစ်သော၊ ဟောဒီ ဒွန္နရာကြီးမှာ ကိုယ်...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – အာဏာရှင်လက်ခုပ်ထဲက ဖန်ကွဲစ (သို့ ) မစိမ်းပင် (မိုးမခ) မေ ၂၇၊ ၂၀၁၆ ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ လမင်းကြီးငေးကြည့်ရင်းနဲ့ဘ၀ရဲ့ မညီမျှခြင်းတွေကို လရောင်အောက်မှာ ကြေကွဲစွာတွေးတောနေတုန်း ဖဘကတက်လာတဲ့...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ရေငုံနှုတ်ပိတ် ကျိတ်ခံစားခဲ့ရ (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၆ ဘာကြောင့်များလဲ ဘာကြောင့်များလဲ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီသတင်းကို စိတ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နားထောင်နေနိုင်ကြလား ….လူဟာ လူပဲ ပြောစမ်းပါ ဘာကွာလည်း……...
မြန်မာပြည်မြေပုံဟာ သူဖြစ်တယ် ၊ ခလေးများဖြစ်တယ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ကြေကွဲမှုဆိုတာ အလျား အနံ ထုထည် တိုင်းထွာလို့ ရကောင်းစရာလား သုံးဆယ့်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ သက်တမ်းလေးတခုအတွင်းမှာ တာဝန်ကျေခဲ့ပုံများ မြန်မာပြည်မြေပုံဟာ သူဖြစ်တယ် ။...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ခရစ်စမတ်ည ဘုရားသခင်နှင့် အထီးကျန်ကမ္ဘာ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅ ခရစ်စမတ်ညမှာ ဘုရားသခင်ဟာ အလုပ်မအားရှာဘူး …. ခရစ်စမတ်ညမှာ တတ်နိုင်သူတွေက အပျော်တွေကို အရည်ဖျော် ၀မ်းထဲမှာ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ဝေဒနာရုပ်ကြွင်း
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ဝေဒနာရုပ်ကြွင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅ ဖိုးချိုရေ ဒီမိုကရေစီရမှ အမျှဝေပါ ဆိုစကား အခုများတော့ ဆွေးပေါ့ ….. ဖိုးချိုရေ NLD နိုင်ချက်ကတော့ သောင်ပြို ကမ်းပြိုပါပဲ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ကမာပုလဲ(သို့ ) ညကောင်းကင်ရဲ့ တေးသမား
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ကမာပုလဲ(သို့ ) ညကောင်းကင်ရဲ့ တေးသမား (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ ကမာပုလဲ ဆုံးပြီတဲ့ … ဗုံးအလုံးပေါင်းများစွာပေါက်ကွဲ ငါကြေကွဲရပြီ …. အသေခံဗုံးခွဲသူတယောက်ရဲ့တိကျတဲ့ပြစ်မှတ်...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ဖေဖေါ်ဝါရီ တဆယ့်သုံးရက်ကို အမြင့်ဆုံးလွှင့်ထူလိုက်ကြရဲ့ 
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ဖေဖေါ်ဝါရီ တဆယ့်သုံးရက်ကို အမြင့်ဆုံးလွှင့်ထူလိုက်ကြရဲ့(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၅ ပဉ္စလက်ဆံဆံ မှော်အတတ်များ အတောမတတ်ကြီးထွား ကောင်းတာကလွဲလို့မကောင်းတာမှန်သမျှ အကုန်ရတဲ့ နေရာကြီးမှာမွေးဖွားကြီးပြင်း ကျနော်တို...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ငါ့ရဲ့ ညထဲမှာ ငါ့ကိုထားခဲ့
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ငါ့ရဲ့ ညထဲမှာ ငါ့ကိုထားခဲ့ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ ည လကို အန်ချလိုက်တယ် နှင်းတွေထဲ ပိုးစိုးပက်စက် လရဲ့ အရိပ်နဲ့ အရောင်များ ညအမှောင်မှာ တောက်ပ ကိုယ့်အတွက်တော့...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ကမ္ဘာလည်း မကြေ ဥဒါန်းလည်းမကျေ ….
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ကမ္ဘာလည်း မကြေ ဥဒါန်းလည်းမကျေ …. သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၄ illustration Lisa Strazza ၀ိရရသများအောင်လံလွှင့်ခဲ့တဲ့ ရွှေရောင်နေ့ ရက်များ ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့အကုန်သာမော့ပြစ်လိုက် အကျေအလည်...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ၏ ဥရောပည ဝေဒနာများ ကဗျာအီးဘုတ် ထွက်ရှိ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၄ European Nights Suffering အမည်နဲ့ ကဗျာဆရာရဲရင့်သက်ဇွဲက မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဖင်လန် ဘာသာသုံးမျိူးပါ ကဗျာစာအုပ်...
တဘ၀လုံးပုံပေးခဲ့တယ် ရဲရင့်သက်ဇွဲ၊ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၄ ဒီအရိပ်အောက်က လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆိုပါတော့ …… တဘ၀စာ လုံလောက်ပါရဲ့ လား ဘ၀များစွာ ပေး ဆပ်ချင်သေးရဲ့ဟေ ဟေ့...